ILA TALI AQRISTE: "labadan Isku fiiri, keebaan doortaa?" - Caasimada Online
Home Warar ILA TALI AQRISTE: “labadan Isku fiiri, keebaan doortaa?”
ILA TALI AQRISTE: “labadan Isku fiiri, keebaan doortaa?”
Aqrsite, waxaan halkan kuugu soo gudbineynaa dhambaal ka yimid aqriste kale oo idinka doonaya talo, waa barnaamijkeeni ILA TALI AQRISTE: Ujeedka ayaa ah qofkii talo raba inuu soo weydiisto aqristayaasha aan u fududeyno, maadamaa uu heli karo fikrado badan oo kal duwan, mark a la isku geeyana noqon kara wax ku ool.
Waxay maanta warqad inooga timid gabar joogta Oslo, Norway oo magaceeda ku koobtay Zahra, waxayna u dhigtay sidan:-
“Waxaan ugu horeyn u mahad celinaa Caasimada Online fursaddan ay ina siisay iyo barnaamijkan cajiibka ah. Intaa kadib, magaceyga waxaan kusoo koobaa Zahra, waayo inay dadkeygu I ogadaaan ma doonayo, wxaaan joogaa Oslo, Norway.
Walaalayaal waxaa I heysata arrin runtii aad ii walaacisay. Waxaa jira wiil aad ii jecel iyo mid aan aad u jeclahay. Xaqiiqdii labadoodaba waa wiilal wanaagsan, waana la sheekeystaa, mid anaa sheekadiisa raba oo ku qasban, midna waxaan ula sheekeystaa ha niyad dilin, waxaana mar walba u sheegaa inaysan jirin wax aynan wadaagi karno, sababo la xiriira jaceylka aan u qabo qof kale.
Sheekadan waxa ay socotaa muddo ku dhow hal sano. Xaqiiqdii, labada wiil waxaan ka dareemaa farqi weyn. Wiilka aan jeclahay, wuu ila sheekeystaa, ila jiibiyaa, wax xumaan ahna kama arko, laakiin marka aan u bar bar dhigo kan I jecel waxaan dareemaa is-beddel weyn, waayo jaceylku maaha hadal ee waa dareen. Tusaale, wiilka i jecel wuu I qadariyaa, mar walba iga war hayaa, isoo wacaa, ii yimaadaa, haddiyado ii keenaa, marka uu dhib I gaaro ila dareemaa, hase yeeshee kana an jeclahay waxa aynu ku egnahay kaliya “waan ku jeclahay” oo afka ah iyo sheeko.
Waan dareemayaaa marka la isku fiiryo arrimahan, waxaa durbaba muuqanaya doorashada wanaagsan, laakin jaceylku saas maaha. Inkasta oo ay jiraan wanaagyadaas oo idil oo wiilkan I jecel aan ka dareemo, haddana qalbigeyga waxa uu mar walba rabaa midka kale.
Waxba idinka qarin maayo waxaan ahay 28 jir, waxaana jeclaan lahaa inaan guursado. labada wiilba sida aan ka dareemo guur waa u diyaar, laakin waxaan ka feekeraa nolol raaxo leh., ha is oran mid aan ku jeclayn maa ku guursanaya, rag badan ayaa guursaday dumar aysan jecleyn, sababtey doontaba ha ahaatee. Waxaan kala dooran waayay laba arrin, oo kala ah:- Inan guursado wiilka I jecel, aniga oo rajeynaya in mar ay ahaataba qalbigeyga uu ka bixi doono kaan jeclahay, ugu damabeynna midkan I jecel uu la dareemi doono jaceylka iyo inaan guursado kan aan jeclahay, aniga oo rajeynaya inuu si dhab ah iisso jeclaan doono mar ay ahaataba. Arrintan aad ayaan uga fekeray welina go’aan waan ka gaari waayay, waqtina wuu igu socdaa waayo waxaan jeclahay inaan ka faa’iideysto da’yarnimadeyda, ee walaalayaal talo wanaagsan I siiya. Mahadsanidiin”
“Ninkeyga laba arrinba waan ka goyn waayay”
“Labadeena Ifka ayaynu isu jecelnahay, haddana hal mid xal waan u waayay”